Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A November 2010 (1)
Q and A November 2010 (1)
1. ရာသီလာတာ မမှန်ဘူး
2. လိင်ဆက်ဆံခြင်း အဆင့်ထိ မရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူး
3. သုတ်ရေ ခြောက်သွေ့ နေစဉ်မှာ မေ့ပြီး
4. Hi Doctor
5. ecee2 ကို ဖြစ်ပြီး တန်းသောက်ရတာလား
6. မိန်းကလေးရောဂါ ရှိရင်လည်း ၂ ကြောင်း ပြတယ်လို့ သိရပါတယ်
Q: ရာသီလာတာ မမှန်ဘူး။ တခါစောတယ်။ တခါနောက်ကျတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ လာရင်လဲ သွေးခဲလေးတွေပါတယ်။ တစ်ခါလေဆို အသားစိုင်လေးလိုလဲပါတယ်။ လာရင် ဗိုက်ကိုက်တယ်။ အသက် ၂၅ အိမ်ထောင်မရှိ။
A: ရာသီဆိုတာ မမှန်တတ်ပါ။ အိမ်ထောင်လဲမရှိ၊ ဆက်ဆံမှုလဲ ကင်းနေသူဆိုရင် စဉ်းစားစရာ ဘောင်ကျဉ်းပါတယ်။ ဗိုက်ကိုက်တာ၊ ဆီးစပ်နာတာလဲ လူအတော်များများမှာ လာဖြစ်တယ်။ Ibuprofen, Paracetamol, Diclofenic, Buscopan ဆေး တမျိုးမျိုး နာတဲ့ရက်တွေမှာ သောက်ပါ။ သွေးခဲဆိုတာတော့ ဖြစ်မယ်။ အသားဆိုင်လို့ ထင်မှတ်တာ နေမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်မှသာ အသားစလိုပါတယ်။ အတုံးအခဲတွေတော့ သူလိုကိုယ်လိုလူတွေမှာ ပါတယ်။ ရာသီရက်-လ မှန်ချင်ရင် အများသုံး ကိုယ်ဝန်တားဆေး ၁ ရက် ၁ ပြားသောက်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲပါဆေးကို ၃-၄ လ ဆက်သောက်ပါ။
Q: လက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသား သုတ်ရေ ခြောက်သွေ့နေစဉ်မှာ မေ့ပြီး ချစ်သူမိန်းကလေးကို မာစတာဘေးရှင်း လုပ်ပေးမိရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ ဘယ်လို စောစောသိမလဲ။
A: သုတ်ပိုးက အပြင်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရှင်နေတယ်ဆိုတာ သူနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်တယ်။ မြင်ရတာလဲ မဟုတ်လို့ မေးတဲ့သူရဲ့ဖြစ်စဉ်တုံးက အထဲဝင်-မဝင် ပြောမရပါ။ ကောင်းတာက ၅ ရက်အတွင်းဆိုရင် အရေးပေါ် တားနည်း သုံးပါ။ မလာရင် Urine for pregnancy test ဆီးစစ်ပါ။
Q: ကျွန်တော်က အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ အလုပ်က interior design ဆွဲပါတယ်။ အညောင်းထိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။ ဒီမနက် ၁ဝ နာရီလောက်မှာ ပုံဆွဲရတာ ညောင်းလို့ မတ်တတ်ရပ်ပြီး တစ်ဖက်ကိုအလှည့် (ခါးချိုးတာ မဟုတ်ပါ) ရုတ်တရက် ဘယ်ဘက် ရင်ဘတ် အောင့်သွားတယ် လေကို တအားရှုသွင်းထားရင် တင်းတင်း အောင့်အောင့် ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်ဘက် ဘက်မောင်း လည်ပင်းတွေပါ အောင့်လာသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ် (အရင်က မခံစားဖူးပါ) ဘယ်လိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ ဘယ်လို စစ်ဆေးကုသမှုမျိုး ခံယူသင့်ပါသလဲ။
A: သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ပြောတဲ့အတိုင်း လှုတ်ရှားလိုက်စဉ်က ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြော နာသွား-ထိသွားတာပါ။ အကြီးအကျယ် မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။ လောလောဆယ် အနာသက်သာဆေး Pain killer တခုခုကို အစာနဲ့ နီးနီးသောက်ပါ။ Neurobion စားဆေးကိုလဲ တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်ပါ။ နာတဲ့နေရာကို ဗမာဆေး ပူတာတခုခုလဲ လိမ်းလို့ရပါတယ်။
Q: Hi Doctor, Kindly find attached, Pls help me.
A: တစ်အချက် စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ကျားအင်္ဂါကြီးအောင် လေစုပ်ကရိယာသုံးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကိုယ်တိုင်သုံးသူတဦးရဲ့ အတွေ့အကြုံကို သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်တာ မလုပ်ခင် တခြားနည်းနာတွေ လုပ်စေချင်တယ်။ ဆရာရေးတဲ့ ဒီအကြောင်းအရာ စာတွေ ဖတ်ပြီးပြီလား။ Viagra ဆေးက အင်မတန် ထိရောက်ပါတယ်။ သုံးဘူးသလား။ အဲဒီနိုင်ငံမှာ နာမယ်တမျိုးနဲ့လဲ ရောင်နိုင်တယ်။ (အင်တာနက်) ကနေရှာလဲရမှာပါ။ အိန္ဒိယမှာ Vigora, Biovigora, Kamagra စသဖြင့် နာမယ်တွေနဲ့ ရောင်းတာ ဈေးမဆိုးပါ။ ၅ဝ-၁ဝဝ အားလာတယ်။ ၅ဝ ဆိုရင်ကို ရနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက စိတ်ခိုင်မာပါ။ လိုသေးရင် မေးပါ။
၁။ ခွဲစိတ်တာကို သိပ်စိတ်မစောစေချင်ပါ။ ခွဲစိတ်နည်းကို တော်တော့ တိုင်းပြည်တွေမှာ မလုပ်ကြပါ။
၂။ Viagra ဆေးက လိုတဲ့ အချိန်မှာသာ သောက်ရမယ်။ အမြဲသောက်နေစရာ မလိုပါ။ မိန်းမနဲ့ အတူနေမယ်ဆိုရင် အချိန် မတိုင်ခင် ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက် ကြိုသောက်ပါ။ တရက်ထဲမှာ နောက်ထပ်သောက်စရာ မလိုပါ။ ကြားရက်မှာလဲ သောက်စရာ မလိုပါ။ ၅ဝ အားသာ သောက်ပါ။ အသက် သိပ်ကြီးသူတွေသာ ၁ဝဝ အားလိုတယ်။ အမြဲအတူနေချင်တိုင်းလဲ လိုချင်မှ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး မပြောပလောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီး မကြာခင် မျက်နှာ ခပ်ရှိန်ရှိန်း ဖြစ်လာတယ်။ သွေး ပိုလျှောက်စေလို့ပါ။ နှစ်တွေနဲ့ချီ ဆေးသောက်သူတွေ ဘေးတွေ့တယ်ဆိုတာ သိပ်မကြားရသေးပါ။ လိုသေးလဲ မေးပါ။
Q: ဆရာ ecee2 ကို ဖြစ်ပြီး တန်းသောက်ရတာလားဆရာ။ ၁၂ နာရီကြား ဆေးနှစ်လုံးစလုံး သောက်ပြီး အဲဒီနေ့ တန်းဖြစ်ရင် ထပ်သောက်ရလားဆရာ။ ဆေးတစ်လုံး သောက်ပြီး နောက်တစ်လုံး မသောက်ခင် ကြားကော ဖြစ်လို့ရလား ဆရာ။
A: ၁။ ဒီဆေးက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပြီးသားကို မပျက်စေနိုင်ပါ။ ဒီဆေးထဲမှာ progesterone or oestrogen ဟော်မုန်းတွေ အများကြီးပါတယ်။ ဥဖြစ်လာမှာကိုတားတယ်၊ ဥနဲ့ သုတ်ပိုး မတွေ့အောင် တားတယ်။ သူတို့နှစ်မျိုးတွေ့ပြီးအုံးတော့ သားအိမ်အတွင်းနံရံမယ် လာတွယ်မှာကို တားတယ်။
၂။ လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ပြီး ၃-၅ ရက်အတွင်း ဆေးသောက်တယ်ဆိုရင် ဆက်ဆံတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖြစ် တားနိုင်တယ်။ ဆေးသောက်ထားတာနဲ့ ၃-၅ ရက်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံမှုက အချိန်အရ အကြုံးဝင်နေရင် ကာကွယ်နိုင်မယ်။ ဆိုလိုတာက နောက်ဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ တွက်ရမှာပါ။
၃။ ဆေး ၂ လုံးစလုံး သောက်ထားမှ သေခြာတယ်။ ပဌမ ၁လုံးနဲ့ ဒုတိယ ၁ လုံးကြား ဆက်ဆံမိတာလဲ အကြုံးဝင်ပါမယ်။
November 09, 2010 5:40 PM
Q: ကျွန်တော်တို့ စုံတွဲက လိင်ဆက်ဆံခြင်း အဆင့်ထိ မရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် oral sex နဲ့ အခြားသော နည်းလမ်း တွေနဲ့ သုတ်ထွက်အောင်တော့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလွန်ဆုံးပြောရရင် ကျွန်တော့် သုတ်ရည်နဲ့ သူ့ vagina နဲ့ ထိမိကောင်း ထိမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတွင်းလမ်းကြောင်းထဲအထိတော့ မဝင်ပါဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အခု သူက ရာသီ မလာတာ ဆယ့်ငါးရက်ကျော်နေပါပြီ ခင်ဗျ အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေက ကိုယ်ဝန်ရရှိစေနိုင်ပါလား ရာသီ မလာတာကရော ဘယ်လို အကြောင်းများကြောင့်လဲ။ ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားရင် အမြန်ဆုံးဘယ်လို နည်းလမ်းများနဲ့ သိရှိနိုင်ပါလဲခင်ဗျာ။
A: ကိုယ်ဝန်ဟုတ်-မဟုတ် အသေအခြာ မပြောနိုင်ပါ။ Urine for pregnancy test နဲ့ စမ်းပါ။ မျဉ်း ၂ ကြောင်းပေါ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်။
ကျမ အသက် ၃၃ နှစ် ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၁ နှစ်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ ၁ ပါတ်ထဲမှာမှ ဖြစ်တာပါ။ ရာသီ မလာတာ ၁ လကျော်လောက်တော့ ရှိပါပြီ။ ဆီးစစ်ကြည့်မလို့ နောက်ထပ် ၁ ပါတ်လောက် စောင့်ကြည့် နေသေးတဲ့ အချိန်ပါ။ ကျမမှာ ငယ်ငယ်လေးထဲက လူကြီးတွေက ပြောတာ မိန်းကလေးရောဂါ သွေးအားနည်းတာ ရှိတယ်လို့ ပြောဘူးပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ သောကြာနေ့ ညက ဆက်ဆံတာ ကျမက မှောက်လိုက် မိပါတယ်။ (ဒူးထောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး) ဆက်ဆံပြီးတော့ သွေးဆင်းပါတယ်။ သွေးဆင်းတာက အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ခါတိုင်း ဆက်ဆံပြီးတော့ သုတ်ရည် ပြန်ထွက်သလိုပါပဲ။ ၁ ခါ တည်းထွက်တာပါ။ စိတ်ထဲမှာ သုတ်ရည်လို့ပဲ ထင်နေတာ။ ပက်လက်ကျတော့ မဆင်းပါဘူး။ ဆီးစစ်ကြည့်ရင် မိန်းကလေးရောဂါ ရှိရင်လည်း ၂ ကြောင်း ပြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျရင်ရော လနုရင်ရော ဘယ်လို လကဏာမျိုးပါလဲ။
ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ Urine for pregnancy test စမ်းတော့ ၂ ကြောင်းပြရင် ကိုယ်ဝန်ရှိတာပါ။ တခြား အကြောင်း တွေကြောင့် ၂ ကြောင်း မပြနိုင်ပါ။ သွေးအားနည်းတာဆိုရင် အသားအရေ ဖြူရော်ရော်နေမယ်။ မောတတ်တယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီး သွေးနဲနဲလေးဆင်းတာ ကိစ္စမရှိတတ်ပါ။ ပျက်တာဆိုရင် သွေးများများ ဆင်းလာမယ်။ ဆီးစပ် နာမယ်။ ဆင်းတာက တဖြေးဖြေး အတုံးအခဲလို ဆင်းလာမယ်။ အဲဒါဆိုရင် နာလာမယ်။ ခါးကိုက်မယ်။ သာမန်အားဖြင့် မှောက်လျှက် ဆက်ဆံတာကြောင့် ပျက်တာဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒူးထောက်အနေအထားလဲ အဲလိုပါဘဲ။ ကောင်းတာက ဆီးစစ်ပါ။ လိုသေးရင် မေးပါ။